KDEApps3: Ngwa KDE Community maka njikwa eserese | Site na Linux
Na -aga n'ihu na nke a nke atọ «((KDEApps3) » site n'usoro isiokwu dị na "KDE Community Apps", Anyị ga -aga n'ihu na -enyocha katalọgụ ya nke na -eto eto free na-emeghe ngwa mepụtara.
Maka ndị nwere mmasị inyocha 2 anyị gara aga mbipụta ndị metụtara isiokwu ahụ, ị nwere ike pịa njikọ na-esonụ, mgbe ị gụsịrị akwụkwọ a:
1 KDEApps3: Ngwa maka njikwa eserese
1.1 Eserese - Ngwa KDE (KDEApps3)
KDEApps3: Ngwa maka njikwa eserese
Eserese - Ngwa KDE (KDEApps3)
Na mpaghara a Ihe eserese, na "Obodo KDE" amalitela n'ihu ọha Ngwa 23 nke anyị ga -ekwu maka ya na ịza ajụjụ ya, n'ụzọ ederede na nkenke, 10 mbụ, mgbe ahụ anyị ga -ekwupụta 13 ndị fọdụrụ:
Onye ahịa nnwale AtCore: API na -ejikwa mbipụta 3D yana arụmọrụ ya bụ isi. AtCore nwere ngwa ndị ahịa nnwale a na-akpọ "atcore-gui" iji jikwaa ngwa nbipute.
Digikam- Ngwa mepere emepe dị elu maka ijikwa foto dijitalụ nke enwere ike ịrụ na Linux, Windows na MacOS. Ngwa a na -enye ngwa ọrụ zuru oke maka mbubata, jikwaa, dezie ma kesaa foto na faịlụ RAW.
Gwenview: Ihe nlele onyonyo ngwa ngwa ma dị mfe iji KDE wuru, dị mma maka ịgagharị na igosipụta nchịkọta onyonyo.
Ikona: Ngwa inyeaka na -enyere gị aka ịchepụta akara ngosi. Ikona na -enye gị ohere ịlele akara ngosi na gburugburu yiri desktọpụ Plasma, nweta palette agba Brisa, na mbupụ akara ngosi na nha dị iche iche.
Karbon: Ngwa ihe osise Vector nke nwere kensinammuo, enwere ike ịhazi ya nke ukwuu yana nwebisiinka onye ọrụ. Ọ dị mma maka ndị ọrụ ka na -amalite inyocha ụwa nke eserese vector, yana ndị na -ese ihe na -achọ ịmepụta iberibe nka vector.
KColorChooser: Ngwaọrụ agba agba agba agba agba wee mepụta palettes agba agba. Ị nwere ike iji eyedropper nweta ụcha nke pixel ọ bụla na enyo.
KGeoTag: Mmemme geotagging kwụụrụ onwe ya. Enwere ike jikọta ihe onyonyo na nhazi ala n'ụdị dị iche iche: n'otu aka, enwere ike iji egwuregwu mepere emepe na GPX; n'aka nke ọzọ, ị nwere ike jiri aka gị kọwaa nhazi ndị a.
Koko: Ngwa maka ijikwa veranda onyonyo.
KolourPaint: Mmemme ịse ihe na -enye gị ohere ịmepụta eserese bitmap ngwa ngwa. Ọ bara uru dịka ihe mmetụ aka yana maka ọrụ ndezi dị mfe.
Ihe dị iche: Onye nlele ụcha dị iche.
KPhotoAlbum: Ngwa ọba foto.
nzu: Ngwa eserese dijitalụ.
KRuler: Onye na -achị maka ihuenyo.
KXStitchOnye nchịkọta akụkọ Cross Stitch.
Ụdị: Onye na -ele akwụkwọ.
Na -agụ Ọgụgụ: Onye na -agụ akwụkwọ na -atọ ọchị.
Daalụ Onye Okike: Onye kere ihe ọchị.
Pix: Gallery gallery.
pvfViewer: Onye na -ekiri ụkpụrụ PCStitch.
Foto ngosi: Onye na -ekiri foto na onye nchịkọta akụkọ.
Asụsụ Skanlite: Ngwa inyocha onyonyo.
Onye Ngosi akara: Onye nchịkọta akara akara stitch.
Na nkenke, na nke a ndezigharị nke atọ "(KDEApps3)" nke ngwa ukara dị adị nke "Obodo KDE", na ọkachasị ndị nọ n'ọhịa Ihe eserese, anyị nwere olile anya na ịmara na itinye ụfọdụ n'ime ndị a n'ọrụ ngwa ọdịnala banyere dị iche iche GNU / Linux Distros na -enye aka n'iji na njupụta nke siri ike ma dịkwa egwu ngwanrọ software lee ka o si maa mma ma na -arụsi ọrụ ike Obodo Linuxera na -enye anyị niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » KDEApps3: Ngwa KDE Community maka njikwa eserese
PineNote, einemepere emepe Pine64 eReader nwere ike ịbata n'afọ a
Facebook ewepụtala kaadị PCIe mepere emepe nke nwere elekere atọm